श्रीमतिको चाहना पूरा गर्न नसकेपछि साथी बोलाए, तर साथी दिनदिनै घर आउन थालेपछि भयो यस्तो घटना – Sanjal Nepal
Homeसमाचारश्रीमतिको चाहना पूरा गर्न नसकेपछि साथी बोलाए, तर साथी दिनदिनै घर आउन थालेपछि भयो यस्तो घटना
December 18, 2020 admin समाचार 3837
एजेन्सी । आफ्नी श्रीमतीको चाहनाले आजित भएका एक युवकले श्रीमतीलाई नै सधैंका लागि यो सन्सारबाट बिदा गरिदिएका छन् । श्रीमतिले जति बेला पनि चाहना राख्ने तर आफूले पूरा गर्न नसकेपछि ती युवाले श्रीमतिकै जीवन अन्त्य गरिदिएका हुन् ।
टाइम्स अफ इण्डियामा छापिएको एक समाचार अनुसार, भारतको छत्तीसगढको विलासपुरका ३० वर्षका ती सञ्जय रजक नामका ती युवकले २६ बर्षकी श्रीमती निर्मलालाई यस्तो गरेका हुन् । उनी आफै प्रहरी कार्यालय पनि पुगेका थिए ।
ती युवककी श्रीमतीमा नि’म्फोमे’नि’या भन्ने रोग भएको बताइएको छ । यो स्वास्थ्य समस्या भएकालाई जतिबेला पनि इच्छा हुन्छ । प्रहरीका अनुसार यस्तो रोग भएकी पत्नीका कारण यस्तो घटना घटेको भारतमै पहिलो हो ।
ती युवकका अनुसार उनको २०११ मा बिहे भएको हो । उनीहरुको एक ५ वर्षका छोरा पनि छन् । घटना हुँदा छोरा पनि घरमै थिए । उनले शव घर भित्रै भान्छामा ब्यवस्थापन गरेका थिए ।
उनले पत्नीको इच्छा पूरा गराउन आफ्ना साथीहरुलाई पनि बोलाइदिए । यसो गर्दा श्रीमतीले उनका साथीहरुसँग नै जतिबेला पनि रमाउन थालिन् । श्रीमतीले उनका साथीहरु बोलाउने सिलसिला दिनहुँजसो चल्न थाल्यो ।
घटनाको दिन पनि श्रीमतीले कुनै साथी बोलाएकी थिइन् । यही कारण पतिपत्नीबीच विवाद भयो ।
January 2, 2021 admin समाचार 3043
November 26, 2020 admin समाचार 1143
काठमाडौ । गरीबीले थिचेपछि दार्चुला जिल्ला सुनसरा वडा नं. ४ का फोरसिंह बिष्ट आजभन्दा एक बर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलमा मलेसिया उडे । सन् २०१९ नोभेम्बर १३ तारिखमा मलेसिया उडेका उनी सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि
February 9, 2021 admin समाचार 2391
LEX 18 agenda conversation: Job club (402677)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (377360)
Hello world! (313138)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (287951)